Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 14
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 14
Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 14
Jesu akabvunza vaFarise kana zvaive pamurayiro kuponesa munhu anorwara nemusi wesabata.
RUKA 14:5 Akati kwavari: Ndiyaniko pakati penyu, ungati, kana mwanakomana wake, kana mombe yake yawira mugomba, ungarege kuiburisa pakarepo nomusi wesabata?
6 Vakasagona kupindura zve pamusoro paizvozvo.
Kana chipfuyo chaive panjodzi musi wesabata, maJuda aizochibatsira kuti chibude mutsaona yachinenge chiri. Saka chii chaive chakaipa pakuporesa munhu musi wesabata?
Kuchibva kwatevera kuraira kwaakaita rudo rwevakuru vechitendero rwekuzviratidza kukosha kwavo.
RUKA 14:7 Zvino wakataura mufananidzo kunavakakokerwa, nokuti wakavona vachizvisanangurira zviigaro zvepamberi, akati kwavari;
VaFarise, sezvo vaive vatongi vesinagoge, vaigarosarudza zvigaro zvepamberi zvakakosha.
Jesu akavayambira: musagare muzvigaro zvepamberi; ... Garai zvigaro zvekumashure;
RUKA 14:11 Nokuti mumwe nomumwe unozvikudza uchaninipiswa: vuye mumwe nomumwe unozvininipisa uchakudzwa.
Mwari anoita zvinhu zvakasiyana nezvatinoita isu.
Pope anenge ari nechigaro chakanakisa pese pavanoungana. Vakuru vezvitendero, veCatholic nevemasangano, vanoda kukosha kwavo pamisangano yeruzhinji.
Jesu akati hatifaniri kuita mitambo tokoka shamwari dzedu, kana hama dzedu, kana verudzi rwedu, kana vavakidzani vedu vakapfuma; nekuti ivo vachakukokawo wowana mubairo wako.
RUKA 14:13 Asi kana wagadzira mutambo wokudya, ukokere varombo, nezvirema, navanokamhina, namapofu.
Havakwanisi kukupa mubairo, saka Mwari ndiye anokupa mubairo.
Ruka akanyora mufananidzo wemurume akaita chirayiro chinova chiratidzo chechidyo chemuchato paKuuya kwechipiri kwaJesu.
(Mateo anonyora pamusoro paJesu saMambo. Anotsanangura mufananidzo mumwechete asi achiti mambo akaitira mwanakomana wake chirayiro chemuchato.)
Musiyano pano ndewekuti zvinhu zvese zvichave zvakasiyana nenzira yatinotarisira.
RUKA 14:16 Iye akati kwavari: Mumwe munhu wakagadzira chirayiro chikuru akakokera vazhinji;
17 Akatuma muranda wake nenguva yekurayira kuti avudze vakanga vakokerwa , kuti: vuyai nokuti zvose zvagadzirwa zvino.
18 Ipapo vose vakatanga nomwoyo mumwe kuzvirevera. Wokutanga akati kwaari: Ndatenga munda ndinofanira kumbondouvona. Ndinokumbira kuti undirevere.
19 Mumwe akati: Ndatenga nzombe dzamajoko mashanu, ndonoenda kundodziidza; ndinokumbira kuti undirevere.
20 Mumwe akati: Ndawana mukadzi naizvozvo handingavuyi.
21 Muranda akavuya akaudza ishe wake izvozvo. Ipapo mwene weimba akatsamwa, akati kumuranda wake: kurumidza ubude kunzira huru neduku dzomusha; uvuye pano navarombo, nezvirema, namapofu navanokamhina.
22 Muranda akati; Ishe izvo zvamaraira zvaitwa, asi nzvimbo ichipo.
23 Ishe akati kumuranda: buda kunzira nokuvuzhowa uvagombedzere vapinde, imba yangu izare.
24 Nokuti ndinoti kwamuri; Hakunomumwe kunavarume ano vandakakokera, ucharavira chirayiro changu.
Vanhu vakatanga kukokwa kuchirayiro panguva yekupedzisira kwenguva yekereke yekupedzisira ndiwo maKristu akaponeswa. Asi hapana aida pakati pavo. Vaive vakabatikana zvakanyanya nekushandisa pfuma yavo nekufara muhupenyu hwavo. Mukadzi, kana mudzimai, anomiririra kereke. MaKristu akabatikana kwazvo nezviitiko zvemakereke avo nezvitendero zvawo. Saka havasisina nguva kana chido chekudzokera kunotenda zvakatendwa nekereke yekuTestamente Itsva nemapositora.
Nzombe dzinokosha. Kune zvipenyu zvina zvakapoteredza chigaro chaMwari chovushe: Shumba, nzombe kana mhuru, munhu uye gondo. Shumba inomiririra nguva dzemakereke maviri ekutanga paiparidzwa chokwadi sezvo Jesu ari Shumba yerudzi rwaJuda. Nzombe inomiririra nguva yerima pakarasika chokwadi apo tsika dzemakereke dzakasiya kutevera Bhaibheri rakanyorwa. Kuratidza kuva nzombe mufananidzo wemuKristu anoedza kutsigira kuti kutenda mune zvisina kunyorwa muShoko kwakanaka. Saka nhasi uno maKristu anogona kwazvo kurwira chakaipa kuti chiite sechakanaka. Kuyananisira zvinhu zvisimo muBhaibheri.
Saka maKristu akaponeswa vakatarisirwa kuti vakagadzirira Kuuya kwake kweChipiri havangakundi. Hillary Clinton aive yambiro kwatiri tese. Semunhukadzi aimiririra kereke. Aive pamusoro pekusarudzwa semutungamiri wenyika yeAmerica asi haana kukunda. Mwari ari kutipa chiratidzo chenguva. Vaya vakatanga kuwana mukana vachakundikana. Clinton aive nembiri kukunda Trump sezvo akawana zvibodzwa zvakawanda pasarudzo. Asi Trump aive asina mbiri akakunda pasarudzo. Kuva nembiri haisi iyo nzira yekukunda nayo.
Zvino “vanamurambiwa” vakanzi nekereke havana tariro vachadaidzwa kumusoro kumakore. Nekuti vachange vachida kutenda kuBhaibheri votevera dzidziso yeTestamente Itsva. Kushaiwa sangano ravanoti ravo kunoita kuti zvive nyore kwavari kuti vatende Bhaibheri nenzira yarakanyorwa nayo. Zviri nyore kutenda chokwadi kana usina kubvira wadzidziswa zvakaipa nesangano.
Donald Trump aive akarambwa nevese vepamusoro-soro saka vaive vasina tariro maari. Asi akakunda.
Tarisirai zvisingatarisiriki. Kana muchinzwa kuti muri pakanaka makamirira Kuuya kwaShe, fungai zvakanaka zvakare. Hillary aive nechokwadi chekuti anokunda. Semunhukadzi, mucherechedzo wekereke yedu yanhasi. Asi haana kukunda.
Chakavanzika chikuru chenguva yedu yekereke yekupedzisira kugona kwakaita hunyengeri hwemakereke nedzidziso yavo yakakwenenzverwa kubvisa maKristu akaponeswa pane zvakanyorwa muBhaibheri.
Vanhu vazhinji vakatevera Jesu asi akabva aisa mirayiro yakaomarara kwatiri vanhu. Jesu haafadzwi nevanhu vanoungana vakawandisa nekuti anoziva kuti pamagumo kuchava nevashoma vachanyatsomutevera.
Ruka ainyanya kubata kutaura kwaitangira pekuti munhu. Izvi zvinotaura basa rine munhu mumwe nemumwe kana tichiti tiri kutevera Jesu.
RUKA 14:25 Zvino vazhinji-zhinji vakafamba naye, akatendevuka akati kwavari.
26 Kana munhu achivuya kwandiri, asingavengi baba vake naamai, nomukadzi navana, novupenyu bwake vo, haangavi mudzidzi wangu.
27 Ani nani asingatakuri muchinjikwa wake, akavuya shure kwangu, haangavi mudzidzi wangu.
Hatingaisi zvido zvemhuri pamusoro pezvido zvaMwari. Varume vanotendera vakadzi vavo kuvatonga nekuti vanenge vachitarisira kuwana runyararo. MaKristu ari muwanano akabva mudzimba dzevabereki vachiri kutendera vabereki vavo kuvatonga. Vabereki vanobva paBhaibheri netarisiro yekufadza vana vavo vakarasika. Hatikwanisi kuisa hupenyu hwedu pamberi kukunda Mwari. Kana kutevera Kristu kukaita kuti mhuri yese indirambe, ndiwo mubairo wandinoda kuripira zvangu. Muchinjikwa unoreva kuti kutambudzika. Jesu anoti tinofanira kutanga taverenga muripo tisati tasarudza kumutevera. Muripo wakakura kwazvo unofanira kuripirwa nemuKristu wechokwadi. Kana tikasangwarira, tinodonha nerutivi.
RUKA 14:30 Vachiti uyu munhu wakatanga kuvaka, akakonewa kupedzisa.
Zviri nyore kuti munhu aponeswe uye atange kuva muKristu. Asi zvakaoma kwazvo kupedza sezvo tichifanira kuwana chokwadi cheBhaibheri munguva ino yekupedzisira inonyengera yepfungwa dzevakuru vemasangano, tsika, uye kugona kurwira zvakaipa kwakachenjera kwazvo.
Kuita uku kwakaoma kwazvo. Asi vanhu vakarurama vanosimbiswa nematambudziko. Nekuisa hwaro hwakadzikira nekuita kuti hupenyu hureruke, Mwari anokwezva vanhu vasirivo chete.
Nguva yeRima yaive murima nekuti Bhaibheri raive risingatenderwi saka kwaive kusina Chiedza chekuti vanhu vatende machiri.
Nguva yatiri kurarama inotipofomadza nekuti ine zvinhu zvakawanda zvinoyevedza zvainotipa asi zvakaipa zvinopfuura nepatiri zvekuti tinoyevedzwa torasiswa nekusaziva. MaKristu nhasi uno zvinoshamisa kuti vanoziva zvinhu zvishoma kwazvo pamusoro peShoko rakanyorwa muBhaibheri.
Chokwadi chinoteererwa nevanhu vashoma zvekuti vashoma ivavo vanopedzisira vabviswa kubva muruzhinji.
RUKA 18:8 … Asi Mwanakomana wemunhu kana achisvika, uchawana kutenda panyika here.
Mhinduro chaiyo kumubvunzo uyu ndeyekuti “kwete” kana kuti “aiwa bodo”.
MaKereke anoti kune vanhu vasingaverengeki vakaponeswa vave maKristu nhasi uno. Izvi zvinogona kuva chokwadi. Saka chii chisipo. Nei Mwari achiti kuchava nevashoma munzira yekutenda muBhaibheri? MaKristu vachange vasisina hanya nekuverenga zvakanyorwa kana kuti simba rekutenda zvakanyorwa muBhaibheri.
Kutenda kunouya nekunzwa Shoko raMwari. Saka havasi vanhu vose vachatenda zvinotaurwa neBhaibheri, kunyangwe vakaponeswa.
MuKristu arimuhondo yemweya uye Satani ndiye waari kurwa naye akasimba, saka musatarisire kuti hupenyu hureruke pachinzvimbo chekunge muchida kuteerera Satani. Kukura kunoita kutambira kwako zvakaipa ndiko kurerukawo kunoita kubata kwaSatani pauri.
RUKA 14:33 Sizvozvo vo, aninani kwamuri asingasiyi zvose zvaanazvo, haangavi mudzidzi wangu.
Tinofanira kugadzirira kupikisana neshamwari dzedu, mhuri dzedu nesangano rekereke yedu nevakuru vekereke yedu. Tinofanira kugadzirira kukanganwa dzidziso dzisimo muMagwaro dzatakadzidziswa nemakereke edu tozviburitsa mupfungwa dzedu kuitira kuti tidzidze zvakanyorwa muBhaibheri.
RUKA 14:34 Munyu wakanaka, asi kana munyu wadurungunda, ucharunga neiko?
Kana tichiti tiri maKristu asi tisingararami neBhaibheri, zvino hatina maturo kunaMwari.
RUKA 14:35 Hauchinebasa pamunda, kana padutu romufudze; unovurashira kunze, une nzeve dzokunzwa ngaanzwe.
“Une nzeve dzokunzwa, ngaanzwe”. Kutaurwa uku kwakadzokororwa kunguva dzose dzemakereke. Iyambiro yekuti tinofanira kuramba tichitevera Magwaro. Pasi rino rese nhasi uno inzvimbo yekuedza kuti tione kuti tingawane here zvikonzero zvekurasa nazvo Magwaro kana kufunga kuti mune chakakanganiswa muBhaibheri.
Patinongotadza kuwirirana uye patinorwisa zviri muBhaibheri, tinenge tisisina maturo muhurongwa hwaMwari hwenguva yekupedzisira.